Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kwePoland neGolden Visa
Sinikezela Ngosizo Lwezokufuduka Komnotho ePoland nge:
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland
● Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela ePoland
● I-visa yegolide ePoland
● Iphasipoti yesibili evela ePoland
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland ngokutshala imali ku-real estate
Khipha ku-internet Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali ePoland kanye nabameli be Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali ePoland kanye nabathengisi bezinhlelo zokuhlala kabusha ePoland kusebenza ngokubambisana ekuvikeleni kwamakhasimende.
Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali ePoland kunikezela ngezinsizakalo zokuhlala ngokutshalwa kwezimali ePoland, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali ePoland, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali ePoland, Ukuhlala kabusha okwesibili ngokutshalwa kwezimali ePoland, ukuhlala kabili ngokutshalwa kwezimali ePoland, ubuzwe kanye nokuhlala ngokutshalwa kwezimali ePoland , Ukuhlala unomphela ngokutshala imali ePoland, Ukuhlala okwesikhashana ngokutshala imali ePoland, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali ePoland, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali ePoland, Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali ePoland, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali ePoland, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali ePoland, okwesibili Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali ePoland, ubuzwe obubili ngokutshalwa kwezimali ePoland, indawo yokuhlala nobuzwe ngokutshalwa kwezimali ePoland, ukuhlala kanye nokuba yisakhamuzi ngokutshala imali ePoland, izinhlelo zobuzwe zezomnotho ePoland, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali ePoland, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali ePoland, okwesibili ipasipoti ePoland, izinhlelo zesibili zepasipoti ePoland , uhlelo lwesibili lwamaphasipothi ePoland, ipasipoti yesibili ePoland, indawo yokuhlala kanye nepasipoti yesibili ePoland, ipasipoti yesibili yezombusazwe ePoland, ipasipoti yesibili ngokutshalwa kwezimali ePoland, ipasipoti yesibili yobuzwe ePoland, uhlelo lwesibili lwamaphasipoti ePoland, izinhlelo zesibili zepasipoti ePoland , i-visa yegolide ePoland, ama-visa egolide ePoland, izinhlelo ze-visa zegolide ePoland, uhlelo lwe-visa yegolide ePoland, i-visa yesibili yegolide ePoland, uhlelo lwesibili lwe-visa egolide ePoland, ama-visa amabili egolide ePoland, ubuzwe kanye ne-visa yegolide ePoland, indawo yokuhlala kanye ne-visa yegolide ePoland, ubuzwe be-visa yegolide ePoland, uhlelo lwe-visa egolide ePoland, izikimu ze-visa zegolide ePoland.
"1 stop solutions" yakho yonke i-Residency yakho ngokutshala imali ePoland ngokuxhaswa okwengeziwe.
Ukutshalwa Kwezimali Okuncane ePoland Kokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali: EUR 100,000
Isingeniso iPoland kanye nokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali
Funda kabanzi ngePoland
IPoland itholakala empambanweni yezwe exhumanisa izindawo ezinamahlathi enyakatho nentshonalanga yeYurophu ezindleleni zolwandle zoLwandle i-Atlantic kanye nezinsimu eziningi zasemaphethelweni ase-Eurasia. Njengamanje inqunyelwe amazwe ayisikhombisa, iPoland ifikile yadlula esikhathini eside, ihlatshwa ngamandla omlando wesifundazwe. Ngasekuqaleni kweNkathi Ephakathi, izindawo ezincane nomasipala basePoland babecindezelwe yizikhukhula eziqhubekayo zabaphambukeli, kusukela kumaJalimane naseBalts kuya kumaMongol. Ngawo-1500s, ukujoyina iPoland kwakuyisifundazwe esikhulu kunazo zonke eYurophu futhi mhlawumbe izwe elihlaba umxhwele kakhulu ezwekazini. Kodwa-ke ngaphezu kweminyaka engamakhulu amabili kamuva, ngesikhathi sePartitions of Poland (1772-1918), yanyamalala, yabela izindawo ezilwayo zaseRussia, iPrussia, ne-Austria.
Ngempela, ngisho nangesikhathi sezimo eziphuthumayo zomphakathi, noma kunjalo, isiko lasePoland lahlala liqinile; empeleni, yaze yachuma, uma kwesinye isikhathi bekude nasekhaya. Izindinganiso ezihlanzekile eziqhubekayo, ezidluliswa ngabashisekeli bezwe abaziwa njengoKazimierz Pulaski noTadeusz Kosciuszko, bafundisa labo be-American Revolution. Umthethosisekelo wasePoland wangowe-1791, osungulwe kakhulu eYurophu, ngaleyo ndlela wajoyina izinkolelo zezihlalo ezingekho emthethweni zaseMelika naseFrance. Okuthunyelwe kamuva kutholakale izinombolo ezinhle kakhulu e-United States, Canada, Argentina nase-Australia futhi badlulisa indlela yabo yokuphila nabo. Ngasikhathi sinye, izingcweti zasePoland zesikhathi sesikhathi sobuRoma, ngokwesibonelo, umdlali wepiyano uFrédéric Chopin nomlobi u-Adam Mickiewicz, babeshayela amalambu ezweni laseYurophu ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye. Balandela imodeli yabo, abantu abayizifundiswa basePoland, abadwebi, abakhiqizi bama-movie nezintatheli bayaqhubeka nokwenza ngcono ubuciko nezincwadi zomhlaba.
Lapho uthuthela esizweni esingaphandle, ukuthola indlela yokuphila yangomakhelwane kungaba enye yezinyathelo zakho zokuqala eziya kuguquko. Ngakho-ke, uma kwenzeka uthuthela ePoland, cishe uzoqala ngokubuza ngabantu bayo, indlela yayo yokuphila, nomphakathi wePole oxegayo. Ngaphandle kwesizwe lapho uvela khona, ngeke uhlangabezane nobunzima obukhulu bokujwayela isimo sezulu sakho esisha ngenxa yomuzwa womakhelwane kanye nobumelwane babahlali bawo, eceleni kwesiko namasiko, ukupheka okungenakuqhathaniswa, nokuningi. Ingxenye enkulu ngokumangazayo ehlala ePoland (cishe ama-60%) isiyikhululekile ezifundeni zamadolobha amakhulu esizwe. Kunamadolobha amaningi amakhulu ePoland, ngempilo ePoland engena kwamahlanu kuwo, afaneleka ukuba yimiphakathi esemadolobheni ebalulekile. IWarsaw, inhlokodolobha yesizwe, iyodwa inabantu ababalelwa ezigidini eziyi-1.7. Iningi labahlali lingelasePoland. Uma kukhulunywa iqiniso, kunedlanzana nje lamaJalimane, abase-Ukraine, abaseSlovak, abaseLithuania nabaseBelarus.
Imihlangano eminingi yesizwe namasiko aseduze aphuma kwimithelela yesiLatin neyaseByzantine futhi asungulwa ngokuqina ngabahlali abahlukahlukene baseYurophu. Njengoba kushiwo ngenhla, impilo ePoland ithinteka ngokufudumele emphakathini wasePoland. Indlela yokuphila iyamema ngandlela thile. Akunandaba noma ngabe awukhulumisani kalula nalolu limi, kungenzeka ufakwe ngokushesha futhi uthole abangane abasha ePoland.
Thumela amasiko ngokuyinhloko azungeze ubungani nokupheka okuseduze, ikakhulukazi maqondana nabangaphandle. Ngaphandle kwezithiyo zolimi, abasePoland banobungane futhi bangenisa abantu abangazukuyeka isikhashana ukuthi babambe iqhaza engxoxweni.
Imihlangano emikhulu eyaziwa kakhulu ePoland nayo idluliselwa kwamanye amazwe aseYurophu ikakhulukazi maqondana nezikhathi zamaKatolika ezinjengoKhisimusi nePhasika. Ngalokho, kunezikhathi ezithile eziseduze njengoSuku Lokuzimela, i-Andrzejki (Usuku lukaSt. Andrew), nezinye.
IPoland sekunesikhathi kubhekiswa kuyona njengesizwe sokufuduka, ikakhulukazi ngemuva kokujoyina i-European Union ngonyaka we-2004 lapho amaPoland amaningi eshiya efuna ukuvuleka kwemisebenzi emazweni acebile asentshonalanga ye-EU.
Ngaphandle kwalokho, umnotho wasePoland ubulokhu uthuthuka njalo kusukela ngaleso sikhathi, noma kunjalo, ufeza intuthuko esheshayo eYurophu ngemuva kwesimo esiphuthumayo semali. Le ndlela ibonakala ezingeni lesizwe lokungasebenzi, obekulokhu kwehla njalo.
NgoJanuwari, ifike kumanani aphansi ka-2.9%, okubeka iPoland kumuntu ohamba phambili kubantu be-EU, ngokuhluke okucacile ekuqedeni ukungasebenzi okuqoshwe emazweni athile lapho amaPoland ngokuvamile efuna umsebenzi, isibonelo, iSpain ne-Italy.
Ngakho-ke, iPoland eminyakeni edlule isibe yisizwe sokuhamba. Ingxenye enkulu yama-debuts amasha ivele empumalanga, kanti ingxenye yesine yabahlali base-Ukraine naseBelarus abayizinkulungwane eziyisithupha njengamanje bagunyazwe njengezakhamuzi ezihlala njalo nezifushane ePoland. Isibalo sangempela siphezulu kakhulu, nebhange likazwelonke lasePoland elihlola ukuthi abantu base-Ukraine abangaphezu kuka-1,000,000 basePoland bajwayelekile ePoland nganoma yisiphi isikhathi esisodwa.
Kodwa-ke kube khona futhi okubucayi, kepha okuphawulwe kakhulu, okwenyuka ngokunyakaza kusuka entshonalanga. Cishe izakhamizi ezingama-67,000 zezinye izizwe ze-EU njengamanje zibhalisiwe njengezakhamizi zasePoland, zisukela cishe ku-24,000 njalo eminyakeni eyishumi emuva.
Imininingwane eyisisekelo yokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kwePoland
Utshalomali oluncane lwe Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland
I-visa ye-National D visa / C yebhizinisi yemisebenzi yebhizinisi
Icubungula isikhathi sokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kwePoland
Ngemuva kweminyaka eyi-10 yokuphila ngokwenziwa kwemvelo.
Ubuzwe obubili buvunyelwe izakhamizi zasePoland
Izinketho Zokutshalwa Kwezimali ze Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kwePoland
Ukusekelwa kwamakhasimende ngokuhlala kabusha ngokutshala imali kwePoland
Ithimba lethu le- Indawo yokuhlala Ngabenzeli Bokutshalwa Kwezimali basePoland futhi Indawo yokuhlala Ngokutshalwa Kwezezimali Abameli kwePoland inikeza amaklayenti nemindeni yawo ePoland ukwesekwa kobuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela ePoland, ukuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela ePoland namanye amathuba okutshalwa kwezimali kwamanye amazwe, emazweni angama-37.
Izinsizakalo zethu azigcini nje ngokuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela ePoland noma i-Golden Visa yasePoland noma ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela ePoland noma ipasipoti yesibili, futhi sisiza emathubeni amahle kakhulu okutshala izindlu nomhlaba ePoland, nokunikeza isisombululo esigcwele uma ufuna ukusungula inkampani IPoland noma ulwandle, izinsiza zabantu ePoland nokunye okuningi, okubandakanya ukuhlelwa kwezezimali nokunye okuningi.
Ukusiza amaklayenti ethu ngezixazululo ezisuselwe ekubeni izakhamuzi ePoland kanye nokuhlala okwesibili.
Ukusekelwa Okukhethekile Kwezakhamizi ZasePoland:
Sinikeza okungabizi Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali for Poland, ngokusebenzisa ezingabizi yethu ifemu yomthetho wokutshalwa kwezimali kanye nowokufika Okwenziwa yiPoland, abasebenzeli bokufika bezokutshala abafinyelelekayo bePoland, Indawo yokuhlala engabizi ngabeluleki bezokutshalwa kwezimali ePoland, Indawo yokuhlala engabizi ngabameli bezokutshalwa kwezimali basePoland nenkampani yokubonisana nabokufika engabizi kakhulu ePoland
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kusuka ePoland kuya emazweni angama-37.
I-visa yegolide ePoland emazweni angama-37.
Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali kusuka ePoland kuya emazweni angama-37.
Iphasiphothi yesibili esuka ePoland iya emazweni angama-37.
Ukuthuthela Kwamabhizinisi Kususelwa ePoland kuya emazweni we-106.
Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali ezivela ePoland.
Izinhlelo ze-Golden visa ePoland emazweni angama-37.
Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali ezisuka ePoland ziya emazweni angama-37.
Izinhlelo zepasipoti zesibili ezivela ePoland ziya emazweni angama-37.
Izinhlelo zebhizinisi lokuthuthela kwelinye izwe zisuka ePoland ziya emazweni angama-106.
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kwePoland ngeReal Estate
Sinikeza ukwesekwa kokutshalwa kwezindlu ePoland ngombono wokuthi iklayenti kufanele lithole inzuzo enhle ekutshalweni kwezimali ePoland, noma kunini, lapho bafuna ukuphuma ekutshalweni okwenziwe yi-Residency yabo ngokutshala imali ePoland. Sibophelene nabathuthukisi bezindawo ezimbalwa ePoland abanerekhodi elihle futhi impahla yabo isezindaweni ezinhle ePoland, ilanda izimbuyiselo ezinhle kakhulu.
Izinhlelo ezinhle kakhulu zokuhlala ePoland ngotshalomali kwempahla yangempela ePoland.
Udinga ukwazi - iPoland Residency by Investment
Ukuhlala kabusha nguMmeli Wotshalomali ePoland kuzohlinzeka ngosizo lwemibhalo oluningiliziwe ngokuhlala kwakho ngempumelelo ngokutshala imali ePoland. Izinsizakalo zethu ezijwayelekile zokuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland zifaka:
Abameli bethu bazoqonda izidingo zakho zokufuduka ePoland noma ePoland, ngokuya ngokuthi iziphi iziphakamiso ezizokwenziwa
Senza inkuthalo yokuqala efanelekile, ukulungiselela umbiko ngaphambi kokuncoma ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland kumakhasimende ukuze athole imvume yokuhlala ePoland kanye nokunciphisa ubungozi bokwenqaba.
Ngokuya ngombiko wokukhuthala wePoland, sincoma nezinye izinhlelo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubekele phambili nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutshala imali ePoland sizodinga amakhophi askeniwe epasipoti yamakhasimende namalungu omndeni.
Ukuhumusha kanye ne-apostille yamadokhumenti Ukuhlala kabusha ngesicelo sokutshala imali ePoland. Abameli bethu abakhethekile be-Residency ngokutshala imali ePoland ne-visa yegolide bazosiza ngokugcwalisa amafomu nemibhalo.
Lapho nje imibhalo yakho neyomndeni wakho ye-Residency ngokufaka isicelo sokutshala imali ePoland isilungile, sizoyigcwalisa ngeziphathimandla ezifanele zasePoland.
Lapho nje isicelo sakho sokuhlala ngokutshalwa kwezimali ePoland sesamukelwe, sihlanganyela izindaba ezinhle nawe bese siqala ukulungiselela ezinye izesekeli.
Asisekeli noma sihlinzeke ngokuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali ePoland kubantu ababalulwe ngezansi noma amabhizinisi ePoland:
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ePoland azinikelwa kubahwebi noma abasabalalisi bezikhali nezinhlamvu ezivela noma eziya ePoland.
Indawo yokuhlala ngezinhlelo zokutshala imali ePoland ahlinzekelwa ukubhekwa ngobuchwepheshe ePoland noma ubuhloli bezimboni bezinhlelo zokutshala imali ngaphakathi noma kusuka noma ePoland.
Indawo yokuhlala ngokubonisana ngokutshalwa kwezimali kwePoland ahlinzekelwa noma yimiphi imisebenzi engekho emthethweni noma yobugebengu ePoland.
Indawo yokuhlala ngokusekelwa kotshalomali kwePoland akukhona okwabantu abasebenza ngezinto ze-Genetic ePoland.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ePoland akukhona okwamabhizinisi asebenzisana ngezikhali eziyingozi noma eziyingozi zebhayoloji noma izikhali zenuzi ePoland.
Indawo yokuhlala ngohlelo lokutshala imali ukusekelwa kwePoland akutholakali kubantu basePoland abasebenza ngokuhweba, ukugcina ePoland, noma ukuthuthwa kwezitho zomuntu.
Indawo yokuhlala ngokutshala imali kwePoland akuyona eyezinkampani zokutholwa ezingekho emthethweni.
Indawo yokuhlala insiza yezinhlelo kwePoland akuzona ezezenkolo namahlelo azo ezosizo ePoland.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ku Poland ayihlinzekwa kubantu abasebenzelana nezithombe zobulili ezingcolile ePoland.
Ukuhlala kwethu abameli ePoland awasekeli ukuhweba ngebhizinisi ngokuthengwa kwezidakamizwa ePoland.
“Isaziso Esibalulekile : AbakwaMM Solutions INC bathatha izinyathelo ezifanele zokuqapha amadokhumenti e-AML kumakhasimende asePoland naseKYC yabo kepha asemukeli noma imiphi imithwalo yemfanelo yanoma ikuphi ukwenqatshwa yiziphathimandla ePoland ukuvunywa kwesicelo Indawo yokuhlala ngokutshalwa kwezimali ePoland.
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland nakwamanye amazwe, kanye nokunye okuningi okusekelwayo.
Sinikezela ngokuhlala okuhle kakhulu ngosizo lokutshala imali ePoland ngokutshalwa kwezimali, ukuthuthela kwamanye amazwe kanye nokuhlelwa kwezindlu ePoland.
Isekelwa yi-Residency yamazwe omhlaba ngesipiliyoni sokutshala imali kanye nezimfuneko zomthetho zasePoland, senza izixazululo ezinhle kakhulu
I-Residency yethu ngezinsizakalo zokutshala imali ePoland inikela ngamanani ashibhile, ngenani lokuphumelela elingafinyeleleka kangcono ePoland.
Sithathe isipiliyoni seminyaka yokuhlala kabili ePoland okuxhasa amaklayenti nemindeni yawo ePoland.
Ukuhlala Okuhlangenwe nakho ngabaceli bokutshalwa kwezimali ePoland nabasebenzeli bezomthetho basePoland abanikeza ukusekelwa kumakhasimende.
Sinabaceli abahle kakhulu kanye nabasebenzeli benqubo yokuphatha yasePoland nosicelo abazibophezele empumelelweni yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho ePoland nangemva kokuvunywa, ilungu lethu leqembu eliphakeme lizoba khona ngebhizinisi noma ukusekelwa komuntu siqu kwePoland
Sinokuhlangenwe nakho kwamazwe omhlaba ku-Residency ngokutshala imali kufaka nePoland, sisiza amaklayenti avela emhlabeni wonke ngezinsizakalo ezihamba phambili.
Uma kwenzeka, ukuhlala kwakho ngokutshala imali ePoland kwehluleka, kunamanye amazwe angama-36 esiwahlinzekayo, sikulungele ngohlelo B.
Bala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland
Ukubala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland sicela ugcwalise yonke imininingwane kufaka phakathi amalungu omndeni kanye neminyaka yabo. Ngenxa yenani elikhulu lamakhasimende ePoland, siyakwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono ngezindleko eziphansi. Izibalo zizofaka phakathi izindleko zokuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali lwePoland nezinye izindleko.
izinhlobo I-visa kwePoland
Inqubo Yezimvume Zokusebenza ePoland
Indawo yokuhlala okwesikhashana ePoland
Indawo yokuhlala unomphela ePoland
Ama-Embasi nama-Consulates asePoland
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali ePoland nakwezinye izinsizakalo
Sibhale phansi izinsizakalo ezimbalwa esizihlinzeka ePoland ngezidingo eziseduze noma ezizayo.
Uma uhlela ukuthuthela nomndeni wakho ePoland ngokutshala imali, thina njengomlingani wakho wePoland, sikhona ukuhlinzeka ngeminye imisebenzi eminingi nokuthi ungadinga nini ePoland ngamanani akhokhelekayo.
Ngaphandle kwe-Residency ngokubonisana nokutshalwa kwezimali kwePoland, sihlinzeka ngamabhizinisi, i-IT kanye nezinsizakalo ze-HR nasePoland, ongazitholi ngaphansi kwesambulela esisodwa esinikezwe abanye abaxhumanisi bePoland abasenza isitolo esisodwa sePoland namazwe we-106.
"Sitshale iminyaka eminingi ye-experimentania nasemhlabeni jikelele emazweni angama-106 ukusiza imindeni, abantu ngabanye kanye nosomabhizinisi basePoland ekufezeni izinhloso nezifiso zabo."
Sisekela indlela yamakhasimende ethu edlula i-Residency ngokutshala imali ePoland ngosizo lwabameli bethu, ababonisi kanye nokubopha ePoland nakwamanye amazwe.
Singakusiza bhalisa inkampani ePoland noma Amazwe ase-Offshore namazwe ayi-106 (Izindleko zokubhalisa inkampani ePoland zishibhile ngathi.)
I-Akhawunti Yasebhange ePoland
Noma yimuphi umtshalizimali othuthela ePoland uzodinga i-akhawunti yasebhange yomuntu siqu ePoland ne-akhawunti yasebhange yenkampani ePoland, singasiza futhi ngama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle.
Ingabe udinga ukubonisana ePoland, ngoba izixazululo zokukhokha zedijithali ePoland njengesango lokukhokha lendabuko noma le-fintech ePoland noma izixazululo ze-crypto, sazise.
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuze IPoland uma uhlela qala ibhizinisi ngokuthenga ibhizinisi elivele likhona ePoland ukuqala ngokushesha ePoland.
Imisebenzi Yezabasebenzi ePoland
Our inkampani yezabasebenzi ePoland ingakusiza ngokuqashwa okusheshayo. Nawe unga ukuthumela izikhala ePoland free.
Izinombolo zefoni ezibonakalayo zePoland
Izinhlelo zebhizinisi zePoland kanye ne izinombolo ezibonakalayo zePoland Amazwe ayi-102 namadolobha angama-291.
Imisebenzi Yezokuhlela Kwezimali ePoland
Accounting, ukukhuthala okufanele ePoland nase okuningi.
Ikheli lehhovisi elibonakalayo ePoland
Ukusetha ibhizinisi ePoland
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland, isethaphu ibhizinisi ku Poland.
Sinikezela ngezixazululo ze-IT ezingezansi ePoland
Ukwakhiwa Kwewebhu ePoland
Ukuthuthukiswa Kwezentengiselwano ePoland
Ukuthuthukiswa kwewebhu ePoland
Ukuthuthukiswa Kwesoftware ePoland
Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali ePoland
Sihlinzeka ngokuhlala ngokusemthethweni ngokusetshenziswa kwezixazululo ze-Investment ePoland futhi impumelelo yamakhasimende ethu ibaluleke kakhulu, ePoland, singabaholi, inkampani yethu yabameli ePoland inezinhlaka ezihamba phambili zabokufika nasePoland, sinedumela lokuletha isipiliyoni sokuhlinzekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu ePoland nge Sula izixazululo zamasu okutshala imali kubantu basePoland nemindeni yabo. Ukuhlala kwethu ngethimba lokutshala imali ePoland kunikeza izixazululo ezenziwe ngobuqili zempumelelo yeKlayenti.
Amalungu akho omndeni (izingane, unkosikazi, abazali) ayayifanelekela imvume yokuhlala ePoland, lapho imvume yakho yokuhlala ePoland ivunyelwe.
Amandla wommeli wasePoland ayadingeka kuzo zonke izenzo zomthetho ezenzelwe wena yi-Residency ngabameli bezokutshalwa kwezimali ePoland. Uma usePoland noma uhlela ukuvakashela iPoland, singathola amandla akho ommeli lapha.
Asikhokhisi imali ethe xaxa ngokuthola iPower of Attorney. Uma uhlela ukuqala ukubhaliswa kwenkampani ePoland ukude, amandla akho abameli kufanele agunyazwe ngokusemthethweni ukuthi asetshenziswe endaweni yasePoland. Ngokuya ngezwe ohlala kulo, kufanele ukuthi liphikiswe noma libhaliswe ngokusemthethweni yihhovisi likazwelonke lasePoland.
Imibuzo Ebuzwa Njalo - Ukuhlala Ngokutshalwa Kwezimali ePoland
Iyini incazelo yokuhlala ngokutshala imali ePoland?
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland, kungachazwa njengokuthola indawo yokuhlala ePoland ngokutshala imali emnothweni wasePoland ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengebhizinisi, ingcebo, amabhondi kahulumeni, njll. Faka isicelo sokuhlala ngokutshala imali ePoland, ukuhlala ngohlelo lokutshala imali ePoland kusekelwa ukuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ePoland, ngokuhlala kwethu okuhle ngabameli bezotshalomali ePoland, indawo yokuhlala engcono ngabameli bezokutshalwa kwezimali ePoland kanye nokuhlala okuhle kakhulu ngabaluleki bezokutshalwa kwezimali ePoland, abasebenza kakhulu ezindaweni zokuhlala ngabenzeli bezimali ePoland, kanye namafemu abonisana kakhulu nabokufika. ePoland.
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali ePoland | Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezimali ePoland | Ukuhlala kabusha ngabameli be-Investment ePoland | Ukuhlala kabusha ngabameli bezotshalomali ePoland | Ukuhlala kabusha ngabeluleki bezokutshalwa kwezimali ePoland
Iyini incazelo yokuba yisakhamuzi ngokutshala imali ePoland?
Ukuba yisakhamuzi ngokutshala imali ePoland, kungachazwa njengokuthola ubuzwe basePoland ngokutshalwa kwezimali emnothweni wasePoland ngezindlela ezahlukahlukene ezifana, ibhizinisi, ingcebo, amabhondi kahulumeni, njll ePoland. Faka isicelo sobuzwe ngokutshala imali ePoland, ubuzwe ngohlelo lokutshala imali ePoland olwesekelwa ubuzwe ngezinsizakalo zokutshala imali ePoland, ngobuzwe bethu obuhle ngabameli bezotshalomali ePoland, ubuzwe obuhle ngabameli bezotshalomali ePoland nobuzwe obuhle ngabeluleki bezokutshalwa kwezimali ePoland, abasebenza ubuzwe obuhle ngabenzeli bezimali ePoland, kanye namafemu amahle kakhulu okubonisana nabokufika ePoland.
Izinsizakalo zokungena kwabatshalizimali ezingabizi ePoland | Ababizi abangena kwamanye amazwe ePoland | Abameli abangabizi bezimali zabokufika ePoland | Abameli abangabizi bezimali zabokufika ePoland | Izeluleko zabatshalizimali abangabizi kakhulu ePoland | Amafemu omthetho wezokufika angabizi ePoland
Iyini incazelo yepasipoti yesibili ePoland?
Iphasiphothi yesibili ePoland, ingachazwa ngokuthi, ukuthola ubuzwe obusemthethweni bePoland ngokutshala imali kwezomnotho wasePoland ngezindlela ezahlukahlukene ezinjenge, ingcebo, ibhizinisi, amabhondi kahulumeni, njll. Faka isicelo sephasiphothi yesibili eya ePoland, uhlelo lwesibili lwephasiphothi ePoland olwesekelwa izinsizakalo zepasipoti zesibili zePoland, ngokusebenzisa abameli bethu besibili abahamba phambili bePasipoti ePoland, abameli besibili abahamba phambili bamaPasipoti ePoland nabeluleki besibili abahamba phambili bePasipoti ePoland, abasebenza kuma-passport wesibili abahamba phambili ePoland, kanye namafemu abeluleka kakhulu ngabokufika ePoland.
Izinsizakalo zepasipoti zesibili zePoland | Abameli bepasipoti besibili ePoland | Abameli bepasipoti besibili ePoland | Abameli bepasipoti besibili ePoland | Abaluleki besibili bepasipoti basePoland
Iyini incazelo ye-visa yegolide ePoland?
I-visa yegolide ePoland, ingachazwa ngokuthi, ukuthola imvume yokuhlala ePoland ngokutshalwa kwezimali emnothweni wasePoland ngezindlela ezahlukahlukene ezinjenge, amabhondi kahulumeni, ibhizinisi, ingcebo, njll. Faka isicelo se-visa yegolide ePoland, uhlelo lwe-visa legolide lwePoland olusekelwa yi izinsizakalo ze-visa zegolide zePoland, ngokusebenzisa abameli bethu be-visa abangcono kakhulu begolide ePoland, abameli be-visa begolide abahamba phambili ePoland kanye nabeluleki abahamba phambili be-visa basePoland, abasebenza kuma-visa wegolide ahamba phambili ePoland, kanye namafemu amahle kakhulu okubonisana nabokufika ePoland.
Izinsizakalo ze-visa zegolide zePoland | Abameli bama-visa egolide ePoland | Abameli begolden visa ePoland | Abameli begolide begolide ePoland | Ababonisi be-visa begolide basePoland
Yiluphi utshalomali oluncane lwe-Residency ngokutshalwa kwezimali ePoland?
Ukutshalwa kwemali okuncane kokuhlala ngokutshala imali ePoland kungu-EUR 100,000.
Ngabe uyayihlinzeka ngosizo lwezomthetho iPoland ye-Residency ngokutshala imali?
Yebo, ummeli wethu ePoland kanye nama-ejenti ePoland ahlinzeka ngokusekela i-Residency ngokutshala imali ePoland.
Ngabe ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland kuyabiza?
Izindleko Zokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali ePoland kanye Nokuhlala kabusha ngezidingo zesikhwama sokutshala imali ePoland ngezabantu abaphezulu abanenani elikhulu, sikhokhisa imali yokubonisana kuphela ye-Residency by Investment to Poland, siphinde sinikeze nezinye izesekeli eziningi ze-Residency ngezixazululo ze-Investment.
Yiziphi izakhamizi zezwe ezingafaka isicelo sokuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland noma nge-visa yabatshalizimali ePoland?
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali kungasetshenziswa izakhamizi zanoma yiliphi izwe kepha zimbalwa izibonelo ezokuhlala ngokutshala imali ePoland kusuka e-Asia, Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland kusuka e-Afrika, Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland kusuka eYurophu, Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland kusuka eNingizimu Melika, Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePoland kusuka eMalaysia, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali ePoland kusuka eBangladesh, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali ePoland kusuka e-Indonesia, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali ePoland kusuka eSri Lanka, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali ePoland kusuka eNepal, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali ePoland kusuka eNdiya naseResidency ngokutshalwa kwemali ePoland kusuka e-UAE.
Ukuhlala Ochwepheshe Ngesiqondiso Sokutshalwa Kwezimali kwePoland
Cela ukubonisana kwamahhala kokuhlala kwakho ngokutshala imali ePoland
Amagama abalulekile ku-Residency by Investment for Poland
UMnyango Wezengqalasizinda Nentuthuko
Xhumanisa UMnyango Wezokufuduka WasePoland , obhekene nokwakha izinqubomgomo zokusheshisa Ukuthuthela Kwelinye Izwe ePoland